ရေနံချောင်းဒီဂရီကောလိပ်မှထူးဆန်းဖြစ်ရပ်မှန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရေနံချောင်းဒီဂရီကောလိပ်မှထူးဆန်းဖြစ်ရပ်မှန်
Posted by thihayarzar on Aug 11, 2010 in News | 32 comments
ပထမဦးစွာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါရစေ။ အရင်ကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ သတင်းသည်လွဲမှားနေပါသည်။ ကျွန်တော်ကိုလည်းခွင့်လွှက်စေချင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်မမှားတော့ပါဘူး။ အမှန်အကန်တွေချည်းပဲ ဖတ်ကြရမှာပါ။ အစကတော့ သတင်းကမပျံနှံအောင် လုပ်ထားတော့ သတင်းအမှန်မထွက်ဘူး။ နောက်မှတိတိကျကျသိရလို့ပါ။ အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်။
ရေနံချောင်းဒီဂရီကောလိပ်မှာကျောင်းတက်နေကြတဲ့ ကျောင်းသူလေးယောက်နဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်တို့ရဲ့ (4 in 1) ဖြစ်ရပ်ပါ။ ကောင်မလေးလေးယောက်က ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို စိတ်ကြွဆေးတွေတိုက်ပြီး မိန်းကလေးမဆန်စွာပဲ …………… ဆက်ဆံကြပါတယ်။ အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ ကောင်လေးကိုပိတ်ထားပြီး ဆက်ဆံခဲ့ကြပါတယ်။ ကောင်လေးက သူတို့လေးယောက်ထဲက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရည်စားတဲ့။ ဘယ်လိုအငြိုးတွေရှိလို့လည်းတော့ မသိဘူးဗျာ ကောင်လေးကို ကွမ်းယာဆိုင်ကနေ စိတ်ကြွဆေးပါဝင်တဲ့ ချိုချဉ်တွေကို တစ်ယောက်တစ်လုံးဝယ်ကြတယ်။ အစကတော့ လေးလုံးလုံးကျွေးဖို့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူးတဲ့။ တစ်ယောက်ဟာကို မစားရင် နောက်တစ်ယောက်ဟာကို စားမယ်ပေါ့လေ အဲလိုသဘောမျိုးနဲ့ကျွေးခဲ့ကြတယ်တဲ့။ ကောင်လေးကလည်းလေးလုံးလုံးကိုစားပစ်လိုက်တယ်တဲ့။ လေးယောက်တစ်ယောက်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကြပါတော့ ကောင်လေးလည်းဘယ်ခံနိုင်မလဲ နှစ်ရက်တောင်ကြာတယ်ဆိုပဲ။ နောက်တော့ သူတို့လည်းမတက်နိုင်တော့ ဆေးရုံကိုပို့လိုက်ကြရတယ်။ ကောင်လေးကရေနံချောင်းမှာမနိုင်တော့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကိုပြောင်းသွားတယ်တဲ့။ ကောင်လေးကတော့ ဘ၀တုံးသွားတယ်။ ကပ်ပယ်အိတ်ကွဲသွားတယ်တဲ့။ ကောင်လေးမိဘတွေကကောင်မလေးတွေကို တရားစွဲထားတယ်တဲ့။ ဒီနေ့အမှုစပြီးတော့ စစ်တာပဲ။ ဆေးရောင်းလိုက်တဲ့ ကွမ်းယာဆိုင်ကိုလည်း တရားစွဲထားပါသေးတယ်တဲ့။ ရုံးကိုတော့ ကောင်မလေးသုံးယောက်ပဲလာတယ်။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတော့မလာဘူးတဲ့ သူ့မိဘတွေကော သူကော ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေပါတယ်။ ကောင်လေးကဘ၀ပျက်သလို ကောင်မလေးတွေကောဘာထူးဦးမှာလဲ။ သူတို့ကပိုတောင်ဆိုးလိမ့်ဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေ ဘာတွေများဖြစ်ကုန်ကြတာလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အားလုံးပဲမြန်မာတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုစောင့်ရှောက်ကြပါ။ နောက်ထပ်ဆက်လက်တင်ပြပါမယ် ………
(လေးယောက်တစ်ယောက်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကြပါတော့ ကောင်လေးလည်းဘယ်ခံနိုင်မလဲ နှစ်ရက်တောင်ကြာတယ်ဆိုပဲ။ နောက်တော့ သူတို့လည်းမတက်နိုင်တော့ ဆေးရုံကိုပို့လိုက်ကြရတယ်။ )
ကျနော်မသိလို့ဗျာ မရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ် အဲဒီအပိုဒ်ကိုပေါ့။
That is why, your name is cobra. Oh I see .
လာထား fight in 1 ဘဲ ..အဲ .. sorry .. five in one ပါ။ စိန်ခေါ်တယ် တကယ်ပါ။ ဘဝ မကဘူး
အသက်ပါ စွန့်မယ် ။
သူငယ်ချင်းတို့ စိတ်ချော့…. စိတ်ချော့..
အပြောချီး —- လုပ်မနေနဲ့
သူ့လို — ဆေးရုံ မှီပမလား?
ယောကျာင်္လေးများ – – ယ္ခုမှစ၍ အထူးသတိပေးချက်-
မကြားဖူးတာတွေ ကြားရတာပဲ… အငြိုးကြောင့် ကိုယ့်ရည်းစားကို အဲဒီလောက် မျှဝေနိုင်သလား…??? ဘာအငြိုးတွေများပါလိမ့်…..
ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်ကြတာလည်း မစဉ်းစားတတ်အောင်ပါပဲ…. အော်…. မျက်လုံးအစုံရှိလို့သာ ဒီသတင်းကိုဖတ်မိတယ်…. တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးနော်….
ယောကျာင်္ဆိုတာ သဘာဝကိုက အဓမ္မအကျင့်မခံရအောင်ကာကွယ်ပေးထားတာပါ။
ကိုယ်က စိတ်မပါဘဲ ဘယ်သူမှ ဘာမှ လုပ်လို့မရပါဘူး။
လေးယောက်ဆိုရင် ၁၂ခါပေါ့။ အဲဒီထက်တော့ စိတ်မပါနိုင် ကိုယ်မပါနိုင်ပါဘူး။
ဘာဆေးသောက်သောက် ဗိုင်ရာဂရာ၊ ကာဗီတာ ဘာဖြစ်ဖြစ် ၁၂ခါထက်တော့မပိုနိုင်ဘူး။
မလာနိုင်တော့ဘူးလေ သူကမှ မလာရင် ဘယ်သူမှ ဘာမှ လုပ်လို့ကိုမရတာ။ ရလား စဉ်းစားကြည့်။
မောပြီးအိပ်ပျော်သွား ပြန်နိုးရင်တော့ စားသောက်လိုက်ရင် ပြန်ကောင်းသွားမှာပါပဲ။
မဖြစ်နိုင်တာတွေ ကလေးကလား တွေ့ကရာပြောတာတွေ ကို ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
ယောင်္ကျား ဆိုပေမဲ့ အဓမ္မကျင့်မယ်ဆိုရင်ခံရနိုင်ပါတယ်… ကမ္ဘာမှာဖြစ်နေတာတွေမနဲပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံမှမဟုတ်ပါဘူး…(most of men can not resist not to erect when there is physical contact withagirl).. အခုလို ဆေးပါကူပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…
လင်းဝေကျော်က ကွမ်းယာဆိုင်နဲ့ ဘာတော်လဲ ဆေးတွေကိုသိနေလို့ နောက်ပြီး … ဘာတဲ့ … 12ခါဆိုလား ဘာကိုတွက်လာပါလိမ့်
လင်းဝေကျော် ပြောသွားတာတွေမှန်ပါတယ် ဘယ်လိုတွက်လဲ ဆိုတာတော့း) ပြောမယုံကြုံဖူးမှ သိမယ်
ဒီလောက် သတင်းပြန်တင်ပေးတော့ နည်းနည်း ယုံလာပြီ။ အင်း မိုက်တယ်နော်။ မြန်မာပြည်မှာ အဲလောက်ဖြစ်နေရင်.. မြန်မာပြည် ပြန်အုံးမှပါကွာ။ ဒီမှာ ဒါမျိုးမရနိုင်လောက်ဘူး။ အလွန်ဆုံး 1 by2လောက်ဘဲ။ ဒါတောင် အတော်ကံကောင်းမှာ။ မဖြစ်တော့ဘူး မြန်မာပြည် ပြန်အုံးမှ ငါတောင်နောက်ကျနေပြီလား မသိဘူး။
အင်း…ယုံရမလားဟင်…:p :p :p
ဖြစ်နိုင်ချေကို စဉ်းစားကြည့်ရင် Viagra အမျိုးအစားထဲက မဖြစ်နိုင်ဘူး .. တော်တော်ဈေးကြီးတဲ့ ခေါင်းခါဆေးကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ် .. အဲဒီဆေးကတော့ သောက်မိပြီးရင် ဘာမှန်းကို မသိအောင် အသိစိတ် လုံးဝ ကင်းကွာသွားတဲ့အတွက် ကောင်လေးခမျာမှာ မိန်းကလေးတွေ အပေါ်တက်ပြီး ဘာလုပ်လို့ လုပ်သွားမှန်း သိလိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး .. ဒါကြောင့် စိတ်ကူးယဉ်တာ ဖြစ်နိုင်သလို .. တစ်ကယ့်လက်တွေ့မှာလဲ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ ..
ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်သေချာစဉ်းစား ကြပါ ဆရာတို့ရယ်……..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်လေးဘက်က မကျေနပ်ဘူး
ဒီလောက်လေးကို မနိုင်ဘူးထင်တယ် …ဆေးလဲကူထားသေးတာကို
တကယ်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာ့ စံချိန်မှီပါဘဲလားနော်…4and 1 တဲ့….. တောက် ငါနော်… အဲ့ကောင်မလေးတွေကို လာခိုင်းလိုက် ကြက်တွန်သံ (၇)ရက်မကြားစေရဘူး . . . . . အာမခံ ဒယ် . . . .
ဘွပဲ ပေးရပေးရ . . . . . ဟွန်း . . ဟွန်း . . . . ထန်လာဗျီ . . . . . . . ငါ့ . ငါ့ . ငါ. . . .နော် …. ဘွပေးချင်းကလဲ
ကွာလိုက်တာ . . . အဲ့လို ကောင်မလေး စိတ်မျိုး ရဲ့ ခြေရာ ဆယ်ပုံတစ်ပုံမျိုးတောင် မတွေ့ဖူးဘူး . . . . . အဟင့် . . . .
လာကြနော် . . . . . တစ်ပုံ လောက်လာကြပါ . . . ကျန်းမာရေးကတော့ ဒေါင်ဒေါင်မြည်ပဲ . . . .
ဒီသတင်းကို သက်ဆိုင်ရာက အထူးတာမြစ်ထားပါတယ်။ ပြည်တွင်းဂျာနယ်လစ်တွေ သတင်းလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီသတင်းမှန်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်း ဂျာနယ်တွေမှာ မသုံးရပါဘူး။ ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာက ဖော်ပြလိုက်တော့ ပိုပြီး ရှင်းသွားပါတယ်။
ဒီသတင်းမှန်မမှန်ဆိုတာ အချိန်တန်ရင်သိရမှာပါ။ ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ ကောင်လေးကလည်းဘယ်လောက်တောင်ပွေးလဲမှမသိတာ။ လေးယောက်လုံးကိုများ အီနေလားမှမသိတာ။ ဒါမျိုးဆိုတာယောက်ကျားလေးတွေအတွက် ဒီဆေးတွေကျွေးနေစရာမလိုဘူးလို့တော့ ထင်တာပဲလေ။ တစ်ယောက်တစ်ခါစီလောက်ဆိုရင်ပေါ့။ရိုင်းသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။
ထူးဆန်းထွေလာ ဤ ကမ္ဘာ ကြီးပေကိုး………………..
ဖစ်မှဖစ်ရလေ…အဘ တို့ရေ ………….. ဒါ့လောက်အစွမ်းကောင်း တဲ့ ဆေး မျိုး ရှိတယ်ဆိုခဲ့ရင် …
အမျိုးအစား နဲ့တစ်ကွ ညွှန်ကြားပေးတော်မူကြပါ..
တိတ်တဆိတ် ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ…………… ၊
ကောင်လေးမိဘတွေက ကြီးကြီး အသိုင်းအ၀ိုင်းကများဖြစ်နေမလား။
ဟွန့်ဘယ်လို မှအခြေအမြစ်မရှိတဲ့သတင်း။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲဒီလောက်တောင်ဆိုးရသလား တကယ်ဆိုရင်တောင် ယောကျာ်းလေးယောက်မိန်းကလေးတယောက်နေမှာပါ။မိန်းကလေးကဆောင့်ကန်လိုက်လို့ ဘောကွဲသွားတယ်ဆို ယုံတုန်တုန် ဟွန့် ကြံကြံဖန်ဖန်တော်။စိတ်ကူးယဉ်နေတာများလားဟင်။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ ဆေးသောက်လို့ ကပ်ပယ်အိတ်ကွဲတယ်ဆိုတာနဲနဲဆန်းနေတယ်။ ကောင်လေးကကြံတာ ကောင်မလေးက လက်မခံလို့ ရုန်းကန်ရင်း ခြေထောက်နဲ့ ဆောင့်ကန်မိလို့ကွဲသွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ သူမိဘတွေက သူ့သားအတွက် ဂလဲ့စားခြေတာများဖြစ်နိုင်မလားမသိ။ ကြားရတဲ့သတင်းတွေက ကျနော်အဖို့ဆန်းနေတယ်။ ဆေးသောက်လို့ ကပ်ပယ်အိတ်ကွဲဘူးတာများ ရှိဘူးလားမသိ။ ကောင်လေးက ဆေးကို ၄လုံးစလုံးသောက်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
Alright, let’s go to Yay nan Choung ( just to doaresearch, don’t think other).
ကပ်ပယ်အိတ်ကွဲတယ်ဆိုတာ ကိုက်ဖောက်လိုက်လို့ ဒါမှမဟုတ် တခုခုနဲ့ရိုက်ခွဲလိုက်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အင်းဗျာ. ကပ်ပယ်အိတ်ကွဲသွားပြီး နောက်ဆက်တွဲအမှု ကို ရခိုင်သွားဖို့ မဲဆွယ်ခဲ့ဖူးသူ သီဟရာဇာ
ရေနံချောင်းက ဖေကံကောင်းတောင် ဥကွဲသွားတယ်ဆိုပဲ..